ဟင်းသီး ဟင်းရွက် အခေါ်အဝေါ်များ | Wutyee Food House
Sis ..ဆူးပုပ် and ပဲကြီး how to call in english ? thx
ဆူးပုပ်ရွက် = concinna leaves, ပဲကြီး = Flat bean.. Thanks
ပဲကြီး is also called Lima Beans
ဆူးပုပ် = conima leaves or concinna leaves , ပဲကြီး = lablab bean
Thanks for information! 😀
ဆူးပုပ် is also called Acacia
If i am not wrong acacia is ထနောင်း or ဆူးဖြူပင်
Yeah I will. 🙂
soe nyunt says:
ဂျူးမြစ်ကိုခေါ်တာကLeek Roots ဖြစ်ပါတယ်။
ကြောင်လျှာသီးပင်ကိုအင်္ဂလိပ်လို (Indian trumpet tree)ခေါ်ပါတယ်။
ဒညင်းသီးကိုခေါ်သည့်ဝေါ်ဟာရပါ။ Google မှာကြည့်ပါ။
ခုလို ဖြေပေးတာ ကျေးဇူးပါ
old pa says:
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ထွေရာလေးပါး ဗဟုသုတလေးတွေပါ။
စကားဝိုင်းထဲ နည်းနည်းဝင်ပါ ပါရစေ။
၁။ ဒညင်းသီးကို Djenkol bean လို့လည်းရေးကြောင်း စာလုံးပေါင်းဖြည့်စွက်ပါရစေ။ (အသီးမှာပါတဲ့ Djenkolic acid ဓာတ်ဟာ ကျောက်ကပ်ကို ရုတ်တရက်ယောင်ယမ်းစေပြီး ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ အာနိသင်ရှိတာမို့ များများစားမိရင် ရေများများသောက်ပြီး ဆီးများများသွားနေစေတဲ့နည်းနဲ့ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ တရားလွန်စားလို့ဖြစ်ရရင်တော့ ထိန်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
၂။ ပဲစိမ်းစားဥကို Ice potato လို့လည်းခေါ်တယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။
၃။ Acacia ကတော့ ထနောင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆူးပုပ် မဟုတ်တာကို ထောက်ခံပါတယ်။
၄။ Rice noodle ကို ဆန်ခေါက်ဆွဲ/မုန့်ဟင်းခါး/နန်းကြီး လို့သာသတ်မှတ်ပြီး Rice vermicelli ကျမှ ဆန်ကြာဇံလို့ခေါ်တာ ပိုပြီး အဆင်ပြေပါလ်ိမ့်မယ်။ ပဲကြာဇံကိုတော့ Bean vernicelli လို့ခွဲခြားခေါ်လို့ရပါတယ်။
FOR #2 JICAMA (YOU CAN FINE IN GOOGLE)
yan lynn Htike says:
ဂျူးမြစ်​ also Allium hookeri
Oo Maung says:
Boil တညင်းသီး (Djenkol beans contain Djenkolic acid) before eating. Uncooked or salted ones can be toxin for the kidneys. https://books.google.co.uk/books?id=20DyLuGabJcC&pg=PA2037&vq=djenkol+OR+djenkolic&source=gbs_search_r&redir_esc=y#v=onepage&q=djenkol%20OR%20djenkolic&f=false
စိမ်းစားဥ /seinn zarr u/n. ice potato.ဒါကတော့ကျနော်စိုင်းအဘိဓါန်မှရတာပါ။
စိမ်းစားဥကိုတော့ (JICAMA) လို့စာလုံးပေါင်းပါသည်(အသံထွက်က ဟစ်ကမာ ဟုထွက်ပါတယ်လို့ )ကျနော်သင်ပေးသူကပြောပါသည်။
အလေးချိန် .. ခွက်ချိန်တွေကို .. ပုံလေးတွေနဲ့ ပြနိုင်ရင် ပြပေးပါလား …
ဆန်ခွက်ချိန်ဆိုတာ ဘယ်လို … စားပွဲတင်ဇွန်းဆိုတာ ဘယ်လိုပေါ့ …း)
တကယ်မသိလို့ပါ ခင်ဗျာ ..
ဟုတ် နောက်ပိုင်းကျရင် ကြိုးစားပြီ ပုံလေးတွေနဲ့ အတိအကျ တွဲတင်ပေးပါ့မယ်
မဝတ်ရည်ခင်ဗျား တချို့ကတော့အတိုင်းတာကိုလက်ဖက်ရည်ပုဂံ (၂ ခွက် ကြွေဇွန်းကြီး ………စသဖြင့်သုံးကြတော့) စံသတ်မှတ်သုံးတဲ့ Measurement Tools ကိုပုံတင်ပြီးပညာပေးပါလျှင်ကျေးဇူးတင်ြ့ပီှးဆထက်တံပိုး ဝိုင်းပြီးအားပေးမယ့်သူတိုးပွါးပါလိမ္မယ်။တင်ဆက်ပေးမှု့များကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဦးစိုးညွန့် (နယူးယော့)
ဟုတ်။ ၀တ်ရည် အားတဲ့တရက်လောက် ပုံတွေနဲ့ သေချာ တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်.. ကျေးဇူးပါ
Thank you so much for your wonderful work here sister, you are really doingagreat job for everyone!!
nan htay htay latt says:
Thank you so much for your blog sis i also like to cook and i can get new list from yours. By the way Sis(salad) also called lettuce, right?
Yeah salad also called lettuce! 🙂
Soe Kyi Phyu says:
ကြက်တုံးချဉ်စပ်မွှေး နဲ့ ကြက်တုံးချဉ်ငံ၇ှယ်ကို eng လို ဘယ်လို ခေါ်၇မလဲ မ ..
SOUR CHICKEN CURRY SPICY
SALTY SOUR CHICKEN CURRY
U SOE NYUNT (NEW YORK)
Chicken Tom Yam Curry sis
မြန်မာလိုကတော့ (ပုစွန် /ba zun/ n.prawn;shrimp;) ပုစွန် -ချဉ်ရည်ဟင်း
ထိုင်းလိုကတော့ (ပုစွန် ကို [ကုံ့]လိုအသံထွက်ပါတယ်) တွန့်ယမ်း ကုံ့ (ပုစွန် -ချဉ်ရည်ဟင်း)
ကြက်သား ကို (ကိုင်) တွန့်ယမ်း ကိုင် (ကြက်သားချဉ်ရည်ဟင်း)
ဆီးဖု (ခရု၊ကမာ၊ကင်းမွန်) တွန့်ယမ်းဆီဖု ( ခရု၊ကမာ၊ကင်းမွန် ချဉ်ရည်ဟင်း)
soe nyunt (New YorK)
Khaing Wint Wah says:
I want to open restaurant, thank you for your information.
အစ်မ glass noodle ကို မြန်မာလို ဘယ်လိုခေါ်တာလဲ သိချင်လို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက black moss fungus ကကော ဘာလဲဟင်။ တရုတ်ဟင်းချက်နည်းတွေထဲမှာ ထည့်တာလေ ပြောပြပါအုံး။
glass noodle = ပဲကြာဇံ။ black moss fungus ကို စားတော့ စားဖူးတယ်၊ မြန်မာလို အခေါ်အဝေါ် မသိဘူး.. 🙂
Sithu Myint says:
black moss fungus ကို မှို ခြောက် ပန်ြးောက် လို့ထင်ပါတယ်
I want to know about Pueraria.
sorry I don’t know .. 🙂
Pueraria ကိုတော့ အမျိုး သမီး တွေ ရင်သား အလှကို ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ မြေကြီး ထဲမှာ ပေါက်တဲ့ ဥ တစ်မျိုးပါ။ ဆေးဖက်ဝင် အသီးပါ
May Thaw Da says:
Ma Wutyee, I really like your blog and it helps lots of people in their cooking.
Also thank you for contributing your knowledge and kindness.
Thanks also par sis 🙂
Thanks for all the vocabulary you got. I noted some I don’t know.
Sis, ဆလပ် is called lettuce. when you mix vegetables together, lettuce, tomatoes, carrot etc it becomes salad.
ဆလက်ရွက် = lettuce ကို ပြောတာပါ
လက်သုပ် (n) kind of Myanmar salad prepared with condiments, vegetables, noodle, etc.
ဆလတ် /sa lin / n. lettuce.
Sine Hla Thein says:
Black Fungus = Black rat ears ( kyet na Yuet ah me )
White Fungus = White rat ears ( kyet na Yuet ah pyu)
Sine Hla Thein
ပဲမြစ်ကို gea beam roots အပြင်တခြားသိပံအမည် ရှိ်ပါသေးလား gea beam roots ကိုရှာကြည့်တာမတွေ့လို့ပါ
ပဲမြစ် /eduble tuber of winged bean.
ပဲမြစ် /eduble tuber of winged bean/Roots of the Winged bean
Kyaw Swar Oo says:
တရုတ်ပဲကော ကို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ မသိဘူး eng လို
Very interesting sis. Very thank u. Ur website helps me in my kitchen….
shwe yoke says:
May I know Zucchini ????????